Taliban ayaa dishay, dhaawacay in kabadan 400 ciidan – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Taliban ayaa dishay, dhaawacay in kabadan 400 ciidan
Kooxda Taliban ayaa dishay ama dhaawacay in kabadan 400 oo katirsan ciidamada amaanka Afghanistan usbuucii lasoo dhaafay, wasaarada arimaha gudaha ayaa sheegtay in ay ku eedeysay kooxda in ay kordhisay weerarada ay wadaan wadahadalada nabada.
Rabshadaha ayaa hoos uga dhacay inta badan Afghanistan tan iyo markii ay Taliban ku dhawaaqday xabbad-joojin saddex maalmood ah oo dhacaysa 24-ka May si loo xuso munaasabada Ciidul Fidriga, laakiin mas’uuliyiintu waxay ku eedeeyeen kooxda inay joojiyeen weerarada maalmihii la soo dhaafay.
Afhayeyn ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha Tariq Arian ayaa yiri:
Wuxuu kaloo ku eedeeyay Taliban inay bartilmaameedsanayaan culimada diinta si ay cadaadis ugu saaraan dowladda Afghanistan.
Weeraro bambaanooyin ah oo lagu qaaday masaajidyada Kabul ee lagu dilay laba hoggaamiye salaad bishaan ayaa ahaa shaqada Taliban, ayuu yiri Arian.
Wuxuu yidhi hadafkaani wuxuu ahaa bartilmaameedka Taliban inuu bartilmaameedsado culimada diinta, gaar ahaan labadii usbuuc ee lasoo dhaafay, wuxuu ku eedeeyey dagaalyahanada hubaysan inay yihiin “dallad koox u ah shabakadaha kale ee argagixisada”.
Afar qof, oo uu ku jiro hogaamiyaha ducada, ayaa ladilay markii uu qaraxu ka dhacay masjid ku yaal Kabul inta lagu gudajiray salaada jimce.
Ma jirto koox sheegatay mas’uuliyadda weerarka oo yimid usbuuc uun kadib markii ISIL (ama ISIS) lagu weeraray masjid ku yaal geeska Kabul ee Green Green si weyn loo adkeeyay oo dilay hoggaamiye salaad caan ah.
Taliban ayaa dhaleeceysay labada weerarba.
Kaddib markii ay bilowdeen inay soo sheegaan hoos u dhac ku yimid guud ahaan rabshadaha kadib xabbad-joojinta, afhayeenka Golaha Amniga Qaranka Javid Faisal ayaa Axaddii sheegay in Taalibaan “aysan yareynin, laakiinse ay kordhiyeen weeraradooda dalka oo dhan”.
Golaha ayaa sabtidii sidoo kale ku eedeeyay in kooxda ay dileen 89 qof oo rayid ah ayna dhaawaceen 150 labadii todobaad ee la soo dhaafay.
Eedeymaha ayaa yimid ka dib markii dowladda iyo Taliban ay cadeeyeen inay ku dhowdahay bilaabida wadahadalada nabada ee dib u dhaca.
Madaxweyne Ashraf Ghani wuxuu balanqaaday inuu dhameystirayo sii daynta maxbuus Taliban ah oo shuruud u ah bilowga wadahadalada kooxda oo loogu talagalay in lagu soo afjaro ku dhawaad ​​labaatan sano oo dagaal ah.
Previous articleAbiy Ahmed iyo wafdi uu hogaaminayo oo saaka gaadhey jibuuti
Next articleJihaadiyiin ayaa tobaneeyo ku diley weerar ka dhacey Nigeria –
Ciidanka Dowlada oo rasaas ku furay dad mudaharaadayo iyo dhowr qof...